जनतासँग घाँटी जोडिएको दस्ताबेज- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २, २०७६ चन्द्रकिशोर
भनिन्छ, पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाकी बहिनी फातिमा प्राय: साडी लगाउँथिन् । त्यतिखेर त्यहाँको मध्यम वर्गका उल्लेख्य महिला साडी नै लगाउँथे । कालान्तरमा सरकारले साडीलाई हिन्दु परिधानका रूपमा हेर्न थाल्यो । अचेल त सिन्धका ग्रामीण इलाकाबाहिर साडी देख्नै छोडिसक्यो । पाकिस्तानी महिलाहरू बाहिर अचेल बुर्कामा बढी देखिन्छन् ।
‘एक मजहब, एक जुबान’ को मोडलमा लम्किएको पाकिस्तानमा जिन्नाले योसँगै शिक्षा, रोजगार, सरकारी संवादका मामिलामा उर्दुको मातहतमा अरू भाषा रहने परिस्थिति बनाए । तर उर्दु जनस्तरको भाषा थिएन । पन्जाबी, सिन्धी, बांग्ला (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान), बलुच लगायतको समृद्ध भाषिक परम्परा त्यहाँ थियो । ती भाषा पाकिस्तानी माटोसँग जोडिएका थिए, विपुल शब्दसम्पदायुक्त थिए ।
विभाजनसँगै पाकिस्तानलाई इस्लामीकरणको बाटामा लैजान यसरी भाषिक–सांस्कृतिक विविधितालाई नामेट पार्न थालियो भने, भारतमा बहुपक्षलाई समेट्ने प्रयास चलिरह्यो । महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले धर्मविशेष, भाषाविशेष, पहिरनविशेषलाई काखी च्याप्ने काम गरेनन् । भारत हिन्दु राष्ट्र हुनेछैन र हिन्दी त्यहाँका दक्षिणी वा पूर्वी हिस्सामा थोपरिनेछैन भनी उनीहरूले सुनिश्चित गरे । त्यहाँ प्रत्येक राज्यलाई आफ्नो भाषिक परम्परा अगाडि बढाउन पाउने स्वतन्त्रता अद्यापि छ । इतिहास साक्षी छ, ‘एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै पहिचान, एउटै देश’ को प्रयोगले पाकिस्तान विभाजित भयो । दक्षिण एसियामा ‘बंगलादेश’ नामले नयाँ राजनीतिक भूगोल जन्मियो । धर्म र भाषाको सवालमा भारत र पाकिस्तानले एक–अर्काभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाए र परिणाम पनि भिन्न–भिन्न बेहोरे ।
शासकले अरूभन्दा पृथक् देखिन कृत्रिम पहिचानहरूको खोजी गर्छ, जबकि आमजन आफ्नो रैथाने पहिचान र परम्परालाई शक्ति ठान्छन् । यहीँनेर शासकले कानुनलाई आधार बनाएर निर्देशित परम्पराको अभ्यास गराउन खोज्छ । अल्पसङ्ख्यकहरू डराएर बस्नुपर्ने देशको संविधानलाई जीवन्त मान्न सकिन्न । संविधानमार्फत राज्यको चरित्र फेरिन्छ । राज्य पुन:संरचना हुन्छ । फेरिने प्रक्रिया जनअपेक्षामा नभई शासकको बलजफ्तीमा भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिंँदैन । अहिले भारतमा पनि एउटै राष्ट्रिय पहिचान दिने वा भारतीय भएको पुष्टि गर्न खास नारा बोल्नुपर्ने जुन संकथन निर्माण गरिएको छ, त्यसले त्यहाँको समाजलाई यही रूपमा सायदै रहन देला । जब एकल पहिचान आत्मगौरवभन्दा पनि सामुदायिक कट्टरतासँग जोडिन्छ, त्यतिखेर त्यसले अन्य पक्षप्रति घृणा र निषेध नै बढाउने गर्छ । नेपालले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण प्रक्रिया, प्रारूप र परिणामले यसको गतिशीलतालाई परिभाषित गर्छ । निर्वाचन मात्रले संविधानको जीवन्तता स्थापित हुँदैन । भुइँतहका जनताले संविधानलाई कसरी हेरेका छन्, स्वयं राज्यसत्ताको यसप्रति कति भरोसा छ, संविधान निर्माण गर्न हतारमा ऐक्यबद्धता गर्न पुगेका दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, जे–जुन कोणबाट संविधानलाई लिएर जसले असहमति व्यक्त गरेका थिए ती के गर्दै छन्, संविधानबाहिर रहेका शक्तिहरूको तागत कतिको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको इमानदार जवाफमै संविधानको आयु निर्धारित हुन्छ । अर्कातिर, संविधान अभ्यासका क्रममा देखिने तगारा र त्यसको व्यवस्थापनका संवैधानिक र नैतिक पक्षहरू छँदै छन् ।
संविधान तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको उपज हो, साध्य होइन साधन हो । संविधानले रूपान्तरणका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूमा अहं र दूरदृष्टिको अभाव रह्यो भने दुर्घटना निम्तिन बेर लाग्दैन । बहुमतको बलमा बहुमतलाई थिच्ने काम प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानले आफै यात्रा निर्धारित गर्दैन । त्यसलाई आकार दिने नेतृत्वमा संविधानको भविष्य गाँसिएको हुन्छ । संविधानसँग जनताको घाँटी जोडिएको छैन भने त्यो फगत शासकीय नेतृत्वको संरक्षण गर्ने चाहनाले मात्र सुरक्षित रहन सक्दैन ।
राज्य पुन:संरचनाका मुद्दा कसरी उठे र संविधान बनाइँदा तिनलाई कसरी बिसाइयो, यो पक्षलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । संविधान घोषणा गरिँंदा कतै उत्सव त कतै उत्सर्गको माहोल थियो । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको मुख थुनेर तत्कालीन सरकारले भन्यो, ‘जयजयकार गर ।’ विडम्बना, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण त हुँदै थियो, तर त्यसमा सबै क्षेत्रका जनताको घाँटी जोडिएको थिएन । अर्कातर्फ, संविधान कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै बहुतहका निर्वाचन र बहुतहका सरकारको अभ्यासलाई गन्ती गर्ने गरिन्छ । मुख्य कुरा त संविधानले सामान्यजनको जीवनमा के फेरबदल ल्यायो भन्ने हो !
निश्चय नै, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणलाई स्थान दिएको छ । तर, सरकारको व्यवहारमा त्यसको छनक पाइन्न । वर्तमान संविधानको शपथ खाएर सत्तासीन भएकाहरू शक्ति केन्द्रीकरणमा लालायित देखिइरहेका छन् र राष्ट्रियताको उही पुरानो ढंग र ढाँचा च्यापेर हिँडिरहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमा लागेकाहरूले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको माला लगाउने होडमा सङ्घीय शैलीकै बाटो अख्तियार गरेका छन् ।
देशको अहिलेको अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । जो सङ्घीय सरकारमा छन्, ती संविधानको अन्तर्यलाई बेवास्ता गर्दै छन् । संविधान घोषणाको अगुवाइ गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानले नचिताएका सवालहरू सुनिन थालेका छन् । सरकारमै सामेल समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस मनाउने उमंग देखाएको छैन । राष्ट्रिय जनता पार्टी सङ्घीय संसदमा छ, प्रदेश २ सरकारमा सहभागी छ, स्थानीय तहहरूमा नेतृत्व गरिराखेको छ, तर पनि भन्दै छ— यो संविधान दिवस हाम्रा लागि कालो दिवस हो । आखिर यो संविधान मान्ने को हो त ? भुइँतहमा अनेक आशंका, अनुमान र उकुसमुकुसको खेती हुँदै छ । भूराजनीतिसँग जोडिएर अनेक अडकलबाजी हुँदै छन् । सङ्घीय सरकार भने सामञ्जस्य र सहकार्यको वातावरण बनाउनभन्दा कानुनको भय देखाएर अरूतिरको देखासिखीमा संविधान पर्व मनाउन खोज्दै छ । जबर्जस्ती झन्डा फहराओ भन्दैमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दिगो हुँदैन । प्रत्येक नेपालीमा यो मुलुकको स्वतन्त्र भविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो रहेसम्म सबैको मनमुटुभित्र चन्द्रसूर्य चम्किरहनेछन् ।
यो संविधानको विकल्प पनि छैन । किनभने यसको समाप्तिसँगै अहिले उपलब्ध लोकतन्त्रका न्यूनतम आधार पनि नजोगिन सक्छन् । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका सवालहरू लोकतान्त्रिक परिवेशकै कारण उठ्न सकेका हुन् । यसको अर्थ संविधानलाई यथास्थितिमै रहन दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । छोटो अवधिको अभ्यासले उब्जाएका अनेक तगाराको उपचार खोज्न ढिलो हुँदै छ । संविधानले जनतासँग जोडिने अनिवार्य सवाललाई आफूमा समेट्ने स्वस्फूर्त यत्न गरेन भने अनेक कोणबाट स्वार्थजन्य अतिवादी नाराले फेरि आकार नलेलान् भन्न सकिन्न । सङ्घीय संसदको गणितले मात्र संविधानको अधोगतितिरको यात्रालाई विराम दिन सक्दैन ।
प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४६